Ruka 12 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Ashaninka Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiChangana (Mozambique) ChiCubeo ChiGuahibo ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Emberá (Catío) Emberá (Northern) Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guambiano Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Inga Isoko Italian Jamaican Creole Japanese Javanese Kabiye Kamba Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Macushi Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Maya Mixtec (Guerrero) Moore Motu Mutauro Wemasaini WekuJamaica Mutauro Wemasaini wechiBelgian French Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wechiSwiss German Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuMyanmar Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSlovenia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali Nias Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pennsylvania German Persian Polish Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Roman) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Rapa Nui Romanian Russian Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 12:1-59
Mbiriso yevaFarisi (1-3)
Ityai Mwari, kwete vanhu (4-7)
Anobvuma kuti anoziva Kristu (8-12)
Mufananidzo wemupfumi akapusa (13-21)
Regai kuzvidya mwoyo (22-34)
Boka diki (32)
Mutariri akatendeka uye mutariri asina kutendeka (41-48)
Kwete rugare, asi kupesana (49-53)
Munofanira kuongorora zviri kuitika (54-56)
Kutaurirana kana matadzirana (57-59)
12 Paiitika izvi, zviuru zvevanhu zvakanga zvaungana zvekuti vakanga vachitsikirirana, uye akatanga nekutaura kuvadzidzi vake achiti: “Chenjererai mbiriso yevaFarisi, kureva unyengeri.+ 2 Asi hapana chinhu chakavigwa zvekuti hachizobudiswi pachena, uye hapana chinhu chakavanzwa chisingazozivikanwi.+ 3 Saka zvese zvamunotaura murima zvichanzwika muchiedza, uye zvamunozevezera mudzimba dzenyu zvichaparidzwa pamusoro pedzimba. 4 Zvakare ndinoti kwamuri imi shamwari dzangu,+ musatya vaya vanouraya muviri asi vasina zvimwe zvavanozokwanisa kuita.+ 5 Asi ndichakuratidzai wamunofanira kutya: Ityai uyo anoti kana auraya, ane simba rekukanda muGehena.*+ Chokwadi ndinokuudzai, ityai iyeye.+ 6 Tushiri tushanu tunotengeswa netumari tuviri tusinganyanyi kukosha,* handizvo here? Asi Mwari haakanganwi kana imwe yadzo.+ 7 Asi kunyange bvudzi remusoro wenyu rakaverengwa rese.+ Musatya; munokosha kupfuura tushiri twakawanda.+ 8 “Ndinoti kwamuri, munhu wese anobvuma kuti anondiziva pamberi pevanhu,+ Mwanakomana wemunhu achabvumawo kuti anomuziva pamberi pengirozi dzaMwari.+ 9 Asi munhu wese anondiramba pamberi pevanhu acharambwawo pamberi pengirozi dzaMwari.+ 10 Uye munhu wese anotaura zvakaipa nezveMwanakomana wemunhu, achakanganwirwa, asi munhu wese anomhura mweya mutsvene haazokanganwirwi.+ 11 Pavanokuendesai pamberi pevanhu vakaungana,* nepamberi pevakuru vakuru vehurumende, nepamberi pevanhu vane masimba, musazvidya mwoyo nezvematauriro amuchaita kana kuti nezvezvamuchataura panyaya dzamunenge muchipomerwa kana kuti nezvemashoko acho amuchataura,+ 12 nekuti mweya mutsvene uchakudzidzisai zvekutaura panguva iyoyo chaiyo.”+ 13 Mumwe munhu aiva pakati pevanhu vakawanda vaivepo akabva ati kwaari: “Mudzidzisi, udzai mukoma wangu agovane neni nhaka.” 14 Iye akati kwaari: “Nhai iwe, ndakagadzwa naani kuti ndikutonganisei kana kuti ndikugovanisei zvinhu zvenyu?” 15 Akabva ati kwavari: “Rambai makasvinura, muchenjerere marudzi ese emakaro,*+ nekuti kunyange kana munhu aine zvizhinji, upenyu hwake hahubvi pazvinhu zvaainazvo.”+ 16 Akabva avaudza mufananidzo, achiti: “Munda wemumwe mupfumi wakabereka zvakanaka. 17 Saka akatanga kuti nechemumwoyo, ‘Ndoita sei zvandisina pekuisira zvirimwa zvangu?’ 18 Saka akati, ‘Ndichadai:+ Ndichaputsa matura angu, ndovaka makuru, uye ndimo mandichaisa zvese zvandichakohwa nezvimwe zvinhu zvangu zvese, 19 ndobva ndati:* “Une* zvinhu zvakanaka zvakawanda zvawakachengeta zvinokwana makore akawanda; zorora zvako, udye, unwe, ufare.”’ 20 Asi Mwari akati kwaari, ‘Iwe benzi, usiku huno vachati vanoda upenyu hwako.* Saka zvinhu zvawakachengeta zvichava zvaani?’+ 21 Ndizvo zvinoitika kumunhu anozviunganidzira pfuma asi asina kupfuma kuna Mwari.”+ 22 Akabva ati kuvadzidzi vake: “Ndokusaka ndichiti kwamuri, regai kuzvidya mwoyo pamusoro peupenyu hwenyu* kuti muchadyei kana kuti pamusoro pemiviri yenyu kuti muchapfekei.+ 23 Nekuti upenyu hunokosha* kupfuura zvekudya uye muviri unokosha kupfuura zvipfeko. 24 Fungai nezvemakunguo: Haadyari mbeu kana kukohwa; haana matura kana tsapi;* asi Mwari anoapa zvekudya.+ Ko imi hamukoshi kupfuura shiri here?+ 25 Ndiani wenyu anogona kuwedzera kubhiti* paurefu hweupenyu hwake nekuzvidya mwoyo? 26 Saka kana musingagoni kuita chinhu chidikidiki chakadai, munozvidyirei mwoyo pamusoro pezvimwe zvese?+ 27 Fungai nezvekukura kunoita maruva: Haashandi kana kuruka; asi ndinokuudzai kuti kunyange Soromoni mukubwinya kwake kwese haana kumboshonga serimwe reaya.+ 28 Zvino, kana aya ari iwo mapfekedzero anoita Mwari zvinhu zvinomera musango, zviripo nhasi, mangwana zvokandwa muchoto, angatadza here kutokupfekedzai kupfuura ipapo, imi vane kutenda kudiki? 29 Saka regai kutsvaga zvekudya nezvekunwa, uye regai kuramba muchizvidya mwoyo;+ 30 nekuti mamwe marudzi ari kutsvagisisa zvinhu zvese izvi, asi Baba venyu vanoziva kuti munoda zvinhu izvi.+ 31 Asi rambai muchitsvaga Umambo hwavo, uye zvinhu izvi zvichawedzerwa kwamuri.+ 32 “Musatya, imi boka diki,+ nekuti Baba venyu vanofara kukupai Umambo.+ 33 Tengesai zvinhu zvenyu mupe zvipo zvengoni.*+ Gadzirai zvikwama zvisingasakari, pfuma isingamboperi kudenga,+ kusina mbavha dzinoswedera pedyo uye kusina chitemamachira* chinodya. 34 Nekuti pane pfuma yenyu, ndipo pachavawo nemwoyo yenyu. 35 “Kwinyai nguo dzenyu*+ uye batidzai marambi enyu,+ 36 uye munofanira kuita sevarume vakamirira kudzoka kwatenzi wavo+ achibva kumuchato,+ kuti paanongosvika achigogodza, vanobva vamuvhurira. 37 Vanofara varanda vaya vanoti kana tenzi achisvika anovawana vakarinda! Chokwadi ndinoti kwamuri, achakwinya nguo dzake* kuti aite basa uye achaita kuti vagare patafura oenda pedyo navo, ovashumira. 38 Uye kana akasvika pakurinda kwechipiri,* kunyange kwechitatu,* akavawana vakagadzirira, ivo vanofara! 39 Asi zivai izvi, kuti kudai muridzi wemba akanga aziva kuti mbavha yaizouya nguvai, angadai asina kurega imba yake ichipazwa.+ 40 Nemiwo, rambai makagadzirira, nekuti Mwanakomana wemunhu ari kuuya panguva yamusingafungiri.”+ 41 Petro akabva ati: “Ishe, muri kungotaura mufananidzo uyu kwatiri chete here kana kuti kumunhu wese?” 42 Ishe akati: “Chokwadi ndiani mutariri akatendeka,* akangwara, achagadzwa natenzi wake paboka revashandi vake* kuti arambe achivapa mugove wavo wezvekudya panguva yakakodzera?+ 43 Anofara muranda iyeye kana tenzi wake akamuwana achiita izvozvo paanouya! 44 Chokwadi ndinokuudzai kuti achamugadza pazvinhu zvake zvese. 45 Asi kana zvikaitika kuti muranda iyeye anoti nechemumwoyo, ‘Tenzi wangu anonoka kuuya,’ otanga kurova vashandirume nevashandikadzi, achidya nekunwa nekudhakwa,+ 46 tenzi wemuranda iyeye achauya pazuva raasingafungiri uye panguva yaasingazivi, uye achamuranga zvakaomarara, omupa mugove pamwe chete nevasina kutendeka. 47 Saka muranda iyeye achabva arohwa shamhu dzakawanda nekuti ainzwisisa zvaidiwa natenzi wake asi haana kugadzirira kana kuita zvaakanzi aite.*+ 48 Asi uya asina kunzwisisa, ndokuita zvinhu zvinorovesa, acharohwa zvishoma. Chokwadi, munhu wese akapiwa zvizhinji, zvizhinji zvichadiwa kwaari, uye uya ane zvizhinji zvakaiswa mumaoko ake, kwaari kunotarisirwawo zvakatowanda kudarika zvaakapiwa.+ 49 “Ndakauya kuzobatidza moto panyika, uye chii chimwe chandingada kana watobaka? 50 Chokwadi, ndine rubhabhatidzo rwandichabhabhatidzwa narwo, uye ndiri kutambudzika chaizvo kusvikira rwapfuura!+ 51 Munofunga kuti ndakauya kuzoita kuti panyika pave nerugare here? Ndinoti kwamuri kwete, asi ndakauya kuzopesanisa.+ 52 Nekuti kubvira zvino muimba imwe chete muchava nevanhu vashanu vakapesana, vatatu vachipesana nevaviri uye vaviri vachipesana nevatatu. 53 Vachapesana, baba nemwanakomana uye mwanakomana nababa, amai nemwanasikana uye mwanasikana naamai, vamwene nemuroora uye muroora navamwene.”+ 54 Akabva atiwo kuvanhu vakawanda vaivapo: “Pamunoona gore richisimuka kumavirira, munobva mati, ‘Kuchava nedutu,’ zvobva zvaitika. 55 Uye pamunoona kuti mhepo yekumaodzanyemba iri kuvhuvhuta, munoti, ‘Kuchapisa chaizvo,’ uye zvinoitika. 56 Vanyengeri, munoziva kuongorora zvinenge zvakaita nyika uye mudenga, asi sei musingagoni kuongorora zviri kuitika iye zvino?+ 57 Sei musingaoniwo mega kuti zvakarurama ndezvipi? 58 Semuenzaniso, paunenge uchienda kumutongi nemunhu akakumhan’arira, edza kutaurirana naye, kuti arege kukuendesa pamberi pemutongi, mutongi okuisa kumupurisa wedare, mupurisa wedare akakukanda mujeri.+ 59 Ndinokuudza kuti haufi wakabuda imomo kusvikira waripa mari yako diki yekupedzisira.”*
^ ChiGir., “nemaasarioni maviri.” Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Kana kuti “pamberi pemasinagogi.”
^ Kana kuti “ekuchiva.”
^ Kana kuti “ndoti kumweya wangu.”
^ Kana kuti “Mweya wangu, une.”
^ Kana kuti “pemweya yenyu.”
^ Kana kuti “mweya unokosha.”
^ Kana kuti “hozi,” kureva imba inochengeterwa zvirimwa zvinenge zvakohwewa.
^ Kana kuti “mupe varombo zvipo.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ ChiGir., “Sungai zviuno zvenyu.”
^ Kana kuti “achazvisunga muchiuno.”
^ Kubva kuma9:00 dzemanheru kusvika pakati peusiku.
^ Kubva pakati peusiku kusvika kuma3:00 dzeusiku.
^ Kana kuti “mukuru wevashandi vemumba.”
^ Kana kuti “pavashandi vake vemumba.”
^ Kana kuti “maererano nekuda kwake.”
^ ChiGir., “reputoni rako rekupedzisira.” Ona Mashoko Ekuwedzera B14.